Ny Mpanjaka Andrianjaka dia maty | Vaovao momba ny fizahan-tany any Afrika
Home » Vaovao momba ny fizahan-tany any Afrika » Ny Mpanjaka Andrianjaka dia maty
Maty androany ny Mpanjaka Goodwill Zwelithini izay Mpanjaka naharitra ela indrindra, Mpanjakan'ny firenena Zulu any Afrika atsimo. Tsaroan'ny filohan'ny birao fizahan-tany afrikanina ny fihaonany tamin'ny mpanjaka.
Mpanjaka Zwelithini no mpanjaka zokiolona ela indrindra teo amin'ny tantara, ary nanjaka nandritra ny 72 taona mahery. Nodimandry tamin'ny zoma XNUMX maraina ny Mpanjaka malala ao amin'ny fanjakana DNS any Afrika atsimo, HM Goodwill Zwelithini. Nanamafy izany ny printsy Mangosuthu Buthelezi an'ny fanjakana Zuly tamin'ny zoma lasa teo.
Nampidirina amina tobim-pitsaboana maika izy noho ny fitsaboana diabeta tany amin'ny faritany atsinanana KwaZulu-Natal tamin'ny volana lasa teo, araka ny fampitam-baovao avy any an-toerana.
Ny filohan'ny komity fizahan-tany afrikanina Cuthbert Ncube dia nampandre ny ATB androany maraina tamin'ny famoahana ity fanambarana ity tamin'ny hafatra WhatsApp maika.
“Ry mpiara-miasa malala, manaintaina mafy sy mavesatra ny milaza ny fahafatesan'ny Raintsika sy Mpanjakantsika.
Mpanjaka Goodwill Zwelithini Mpanjakan'ny Zulus androany maraina. Enga anie isika hahatsiaro ny Fianakaviana amin'ny vavaka ataontsika. Ny Zanakavaviny dia ao amin'ny fianakavian'i Afrika Board Board (ATB) ary nangatahana hiara-miasa amin'ny Hon. Ny minisitry ny Eswatini dia manohana ny fandaharanasa hetsika ho an'ny hetsika Kolontsaina 2020.
Ny filohan'ny ATB Alain St. Ange, Seychelles dia nilaza hoe: "Fiombonam-po amin'ny governemanta sy ny olona atsy Afrika Atsimo. Nanana ny haja sy fahafinaretana aho nihaona tamin'ny Mpanjaka Andriamatoa ary nahatadidy mazava tsara izany fivoriana tsy hay hadinoina izany.
Misy 12.1 tapitrisa Zulus miaina amin'ny firenena fito, ny ankamaroany dia any KwaZulu-Natal, Afrika Atsimo. Ny fivavahana manjaka dia ny Kristianisma. Zulus no foko lehibe indrindra any Afrika atsimo, misy mponina vitsy any Zimbabwe, Swaziland, Botsoana, Malawi, Lesotho, ary Mozambika. Ny boney dia fiteny bantu.
The Fanjakana Kingdom, indraindray antsoina hoe ny Fanjakana Empire na ny Fanjakan'i Zululand, dia mpanjaka iray tany atsimon'i Afrika izay nanitatra ny moron'ny Ranomasimbe Indianina nanomboka tamin'ny renirano Tugela atsimo ka hatramin'ny reniranon'i Pongola any avaratra.
Ny fanjakana dia nitombo ka nifehy ny ankamaroan'ny KwaZulu-Natal sy Afrika atsimo.
Tsindrio ny manaraka raha hamaky bebe kokoa